၂၀၁၂ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအရာစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, မေလ 7, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယခုရှေ့တန်းပြေးသူများရှင်းနေသည် (ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏ Libertarian သားကသဘောမတူပါ) စခန်းနှစ်ခုလုံးအခြေချပြီးအွန်လိုင်းနည်းဗျူဟာများစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ Whitehouse ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်လိပ်စာများသိမ်းဆည်းရန်landရာမဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီး information ည့်သည်သည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုရရန်နှိပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Whitehouse သည် infographics မှန်သမျှကိုမှန်မှန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အမျိုးသားကြွေး, ဓာတ်ဆီစျေးနှုန်းများနှင့်ပင် အီရတ်တွင်စစ်တပ်အဆင့်ဆင့်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုနည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲရှိတာကိုနည်းနည်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ ငါမကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး infographics အချို့ကိုကြည့်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ဒီအားထုတ်မှုတွေအကြောင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်အဝရှင်းပြဖို့။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအပိုဆောင်းနည်းဗျူဟာတွေထည့်သွင်းထားတယ်။ ဥပမာဂျူလီယာ၏ဘ ၀ သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသောသတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး that ည့်သည်သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသမီးများအားမည်သို့ကူညီလိုသည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမှာစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။ Life of Julia ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံရပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းပင်ခံရသည်။ ဂျူလီယာ၏ဘဝသည်လွတ်လပ်မှုအရသိရသည်:
Mitt Romney ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ အလယ်တန်းအဆင့်မှလူငယ်များ၊ ဟစ်စပန်းနစ်အင်ဂိုဖရန်စ်မှစီးပွားရေးနှင့်ကွဲပြားသောရှုထောင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်လူတို့နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ရီပတ်ဘလစ်ကန်များကမူနှောင့်နှေးနေပုံရသည်။ ဂျူလီယာ၏ဘ ၀ ကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ကောင်းခံရနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်ခုစီအလိုက်ခွဲခြားထားသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဂျူလီယာ၏ဘ ၀ သည်ဝေဖန်သူများ၏မဲကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သမ္မတအိုဘားမားဖော်ထုတ်သောအလားတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနိုင်သည့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များ၏မဲကိုယိမ်းယိုင်စေနိုင်သည်။ ဒါကမကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာမဟုတ်ဘူး။
သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ - သမ္မတအိုဘားမားကိုပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည်သူ၏နုိုင်ငံရေးနည်းဗျူဟာကဲ့သို့အရောင်တောက်တောက်ပုံမပေါ်ပါ။ ငါပါးစပ်ဖျားမှာလျှာတစ်ချောင်းတင်လိုက်တယ် အိုဘားမားနောက် Vista ဖြစ်ခဲ့သည် သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီး။ သမ္မတအိုဘားမားကိုကျွန်တော်အပြစ်မတင်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်လူငယ်များနှင့်အလှည့်ကျမဲဆန္ဒရှင်များ၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်စေသောအရှိန်အဟုန်နှင့်လှုံ့ဆော်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်စွဲမှတ်လျက်နေဆဲဖြစ်သည်။
လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသေံရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဒါဟာမရှိတူညီသောစိတ်ကူးယဉ်အကောင်းမြင်ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအလွန်ဆိုးဝါးသောစီးပွားရေးနှင့်အကြီးအကျယ်အသုံးစရိတ်များအသုံးပြုမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤအသံသည်အနည်းငယ်သာလေးနက်သည်။ နံပါတ်များကိုလှည့်ဖျားခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်မှုများကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာများအတွက်ဆင်ခြေများစွာပေးခဲ့သည်။ ငါကမကောင်းတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကထုတ်လုပ်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်! ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးများအတွက်အများကြီးပိုပြီးအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမျှော်လင့်!
မှတ်စု: နိုင်ငံရေးကိုဖုံးကွယ်ရန်အမြဲခက်ခဲသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ် ပြီးတော့အားထုတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ထဲကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး စီကိုစိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံသူတွေဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော့်ရဲ့လွှမ်းခြုံမှုကိုဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှကားမတိုက်ဖို့၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အခြားနိုင်ငံရေးဆိုဒ်များအတွက်သင်၏ trolling ကိုသိမ်းဆည်းပါ။
Statdash: Ultimate Dashboard ကိုတည်ဆောက်ပါ